Welcome to Aayaha Nolosha » KORONTO BAAJISAY BURBUR QOYS.
KORONTO BAAJISAY BURBUR QOYS.
March 9, 2018 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Habeenkii xallay ahaa waxaa Alle Qoys ka bad baadiyay burbur ku iman lahaa, taasoo sabab looga dhigay Koronto ka maqneyd xaafado ka mid xaafadaha ay qoyskaasi deganaayeen oo ka mid ah degmadda wadajir.
Magaallada Muqdisho waxaa ka jira shirkaddo gaar loo leeyahay oo ka mid ah kuwa korontada ee xaafadaha dabka siya, waxaana ka mid ah:- BECO, MUQDISHO POWER, ISAF, BLUE SKY, Shirkaddahani iyo kuwa kale oo laga yaabo inaan xusuusan ayaa addeeg koronto 24 saac ah ka bixiya Muqdisho.
Hadaba Habeenkii Xallay ayaa Shirkadda Korontadda ee Muqdisho Power waxa ay ka maqneyd qeyb ka mid ah xaafadaha degmada Wadajir taasoo ay ka tagtay maqribkii iyaddoo illaa habeenkii 9:35Pm maqneyd.
Qoyska Illaahay ka badbaadiyay burburka ee Korontadda Sababta looga dhigay ayaa waxaa ugu jirtay ama ay adeegsaddaan korontadda xallay Waqtiga yar ay cillada ku timid ee Muqdisho Power. Gabdho la dhashay Hooyadda Guriga lagu qabo & Hooyadaba ayaa si aad ah u daawadda aflaanta Hindiga ee afka Soomaaliga ku hadla FANPROJ loo yaqaano. Oddayga Qoyskan ayaa markasta Hooyadda Guriga ku murma Daawashadda Aflaanta Hindiga ee Soomaaliga ku hadlay caruurtana ay kaga haraan aqriska daruusta.
Odayga oo inta badan Habeenadda Jimcaha soo hoydda Xallayna ay habeenkiisa aheyd ayaa waxaa jirtay in todobaadkii horey ay si aad ah isugu buukheen xaaskiisa oo si dirqi ah lagu dhexdhexaadiyay, balse uu wacad ku maray todobaadka soo socda ee xallay ahaa haduu yimaaddo iyadoo Hindi la daawanayo uu furi doono xaaskiisa.
Gabadhii uu qabay iyaddana Allaah na gaarsiiyo aan aragno sida aad ii furto inteey tiri lagu kala maqnaa, Waxaa Alle Mahadii noqotay ineeysan dhicin Burburkaasi waayo Korontaddii ayaaba maqneyd ninkii intuu yimid ayuu howlihiisa caadiga gallay gurigisa ayuu nabad ku joogay xili danbe mar ay timidna waaba xiligiii u dhamaan jiray Filimka.
Deriskii oo dhagaha ay u taagneyd iyagoo ka walwalsanaa waxa dhici doona ayaa ku farxay cilada Korontadan maadaama laga yaabay sheydaan inuu ka faaideysan lahaa Qoyskaasi. Balse ay xili danbe oo fiid ah ay timid sidiina xaalada caadi isaga ahayd hindigiina aan la daawan finadiina sadaasi ay ku fashilantay.